LAHARAM-PAHAMEHANA ATY AFRIKA: Fanomezan-danja ny maha olona, famoronana asa, fanarenana ny toekarena – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:31
Ny herinandro teo no notontosaina tao Abidjan ny fihaonambe.
Accueil/Politika/LAHARAM-PAHAMEHANA ATY AFRIKA: Fanomezan-danja ny maha olona, famoronana asa, fanarenana ny toekarena
LAHARAM-PAHAMEHANA ATY AFRIKA: Fanomezan-danja ny maha olona, famoronana asa, fanarenana ny toekarena
Anisan’ny voaresaka tao anatin’ny fanambarana niombonan’ny Firenena Afrikanina rehetra nandray anjara tamin’ny fihaonambe faha-20 ny IDA ny 15 Jolay teo ny fijerena ireo sehatra tokony hifotoran’ny asan’ireo Mpitondra aty Afrika, ka nivoitra tamin’izany ny fanomezan-danja ny lafiny maha olona, ny famoronana asa amin’ny alalan’ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina, ary ny fanarenana ny toekarena.
Lucien R. 19 juillet 2021
Niray feo ireo Filoham-pirenena sy Filoham-panjakana rehetra aty Afrika ny tokony hampiakarana ny fanampiana ho azon’I Afrika eo anivon’ny IDA ho 100 miliara Dolara mba ho fiarenan-doha taorian’ny Krizin’ny Covid-19. Andrasana, araka izany, ny fivalian’io fangatahana io. Na izany aza, efa niara-namaritra ireo sehatra laharam-pahamehana sy tokony hifotoran’ny asan’ireo Mpitondra isaky ny Firenena ny fihaonambe tany Abidjan ny herinandro lasa teo. Isany voaresaka tamin’izany ny tokony hanomezan-danja ny lafiny maha olona. “Izany dia mitaky fanatsarana ny rafitra ara-pahasalamana, ny fanabeazana, fampidirana ny tanora eo amin’ny sehatry ny asa amin’ny alalan’ny fanatsarana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa”, hoy ny fanambarana. Ho antsika eto Madagasikara manokana, efa misongadina ny asa vita raha ity lafiny fahasalamana sy fanabeazana ary fanofanana arak’asa ity, saingy mila tohizana ny ezaka.
Tetsy ankilany, niombonan’ny rehetra hevitra koa ny tokony hampiroboroboana ny famoronana asa amin’ny fanosehana ny sehatra tsy miankina sy ireo mpisehatra tsy azo ialàna amin’ny fanodinana ny toekarena. “Izany fampivelarana ny sehatra tsy miankina izany dia mitaky ny fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana amin’ny ankapobeny”, hoy ny fanambarana. Ankoatra ireo anefa, isan’ny voaresaka koa ny fanarenana ny toekarena. “Ny firenena Afrikanina dia mila tetibola mifanaraka amin’izany zava-misy ao aminy mba hiatrehana ny krizy sy hanarenana indray ny toekarena, izay tsy tokony hampibaby trosa tafahoatra indray”, araka ny tatitra hatrany. Ity fanarenana ny toekarena ity koa anefa dia tokony mifanindran-dalana ny fametrahana paikady ho fisorohana mialoha ny krizy, ho fiarovana ny toekarena sy ny vahoaka amin’ny voina hafa indray toy ny valanaretina, ny loza voajanahary, ny tsy fanjariantsakafo sy ny sisa.
Tsara ho fantatra fa nandray anjara feno tamin’ity fihaonambe ity isika Malagasy tamin’ny alalan’ny Filoha Andry Rajoelina sy ny Delegasiona notarihiny. Teo koa ireo Firenena Afrikanina hafa toa an’i Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau,Libéria, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie et Togo.
MASOIVOHO VAOVAON’NY STAR TOAMASINA: Ainga vao amin’ny fampandrosoana ara-toekaren’ny Faritra Atsinanana
FIADIDIANA NY FARITRA ANALAMANGA : Mifototra amin’ny fanaovana fotodrafitrasa manakaiky vahoaka